Isikhathi sokufunda: 10 amaminithi
Ngaphambi kokuthi uqale, ake sibalo sika ncamashi kungani Europe engcono sabhekana nge- travel isitimela- ngemva kwakho konke, lokhu zwekazi liye owakhiwe ngenjongo ezinkulungwaneni zeminyaka, okusho ingqalasizinda yayo ngokuvamile athuthukile. Okunye zezokuthutha atholakala kalula, kodwa kukhona into ishiwo for nokuyenga grand ikhambo isitimela. This is especially true for first-time travelers, who can take advantage of train schedules to hop on board just before it departs. Lokhu kwehluke kakhulu esijulile zezindiza yaseYurophu, lapho okungenani ukufika isikhathi sakho ngaphambi sokusuka amahora okungenani amabili, futhi uchitha isikhathi esengeziwe nemali beya indawo sezindiza.
njengoba kushiwo, zonke Eurostar amathikithi zihlanganisa izingcezu okungenani ezimbili umthwalo and a handbag. Uma ngokuletha eminingi, you can also opt for a higher class ticket that allows you to bring more bags. Ngokungqubuzanayo, isabelomali izindiza ingashaja kancane for ukubhuka zabo kokuqala, kodwa isikhwama izimali kanye isihlalo ukukhetha amacala ngokushesha tente.
Ticket izintengo lolu hambo bavame iyashintshashintsha okuningi, ngakho sincoma ukuthenga amathikithi ngokushesha nje uyakwazi. Sengisho nje, lezi amathikithi niqhubeke ukudayiswa izinyanga ezintathu kusengaphambili, Nokho kuye isizini futhi ungathola kuzo izinyanga eziyisithupha kusengaphambili. Sincoma ukuthi usebenzise yethu iwebhusayithi ukuthola futhi ukubhuka amathikithi yakho isitimela, which automatically searches all available inventory to get you the price possible, yibhange.
I Eurostar isitimela usebenza ezintathu-class apholile, kuye ngokuthi ibhajethi yakho. Kulabo nje ngifuna ukusuka endaweni eyodwa kuya kwenye, second-class tickets are your best option. Labo ku Ukuhamba ngezebhizinisi kungase esikhundleni saloko ithikithi Standard Premier noma Business Premier, kokubili okukuvumela ukuba ahlale unqambothi abaqeqeshi isidlo ngenkathi kho hambo!, so let’s learn a little about London to Paris train tickets:
2 pieces of luggage and one handbag included
3 pieces of luggage and one handbag included
ukukhansela Mahhala kanye Ukuhwebelana angenamkhawulo kuze kufinyelele 60 izinsuku emva kokumuka ku yonke imizila phakathi UK, France, futhi Belgium.
It’s worth noting that Eurostar is not available to all those who hold a rail pass, so if you want to make this journey enticing and affordable, uthenge ithikithi lakho Isitimela kusengaphambili. Ungathola izitimela amathikithi inthanethi at amawebhusayithi ahlukahlukene, Nokho kungase ithikithi isitimela amanani ulele kuqhathaniswa Londoloza Isitimela.
Kuye ekilasini lakho yokugibela, ungafuna ukufika esiteshini sakho sokuhamba okungenani 40-60 minutes before the train leaves from London to Paris. If you’ve booked a first-class Business Premier ticket from London to Paris, uzoba ukufinyelela lounge okukhethekile. kungenjalo, zikhona izitolo eziningi zokudla seliyatholakala ukuthi peruse. Ezinye zokudlela esizithandayo zihlanganisa:
AMT Coffee – A coffee shop elinezindawo ezimbili ngaphakathi iziteshi. It unikeza iziphuzo ngezandla futhi izinkomishi compostable ngokugcwele, which make the environment smile.
Chop'd – A yokudlela impilo-egxile, Chop’d offer a variety of soups, salads, stews, and wraps for all types of travelers.
Uma ebhodini, isikhathi esiphelele travel esuka eLondon aye Paris cishe 2 amahora 16 amaminithi. Kuhlanganiswe ne zangaphambi Ukuhamba ozofika, Imininingwane yakho uhambo isikhathi kuyoba emhlabeni 3 amahora.
Njengoba kushiwo ngaphambili, there’s free WiFi on board, ukuze ukwazi ukuhambisana nawo wonke amakheli akho kanye nezidingo zokuxhumana. Kuye ithikithi lakho, ungase futhi baye Umqeqeshi yokudlela, lapho ungathola ukudla, iziphuzo, Ungadla. Uma ehlezi endlwaneni eyakhiwe unqambothi, ukudla kuyolethwa ngqo esihlalweni sakho.
Uma ufika, uzoba enhliziyweni edolobheni, ezele okukhethwa kukho ukudla, izitolo, neziphuzo. Uma ukhetha ukuhamba iziteshi, uzothola eseduze Brasserie Terminus Nord, a famous Art Nouveau style restaurant directly across the road from the train station. kungenjalo, udinga nje ukuba zizule ukuphendukela kunoma iluphi uhlangothi ukuthola ezinye enokudla iziphuzo e-Europe.
I Eurostar siphela ngokuvamile, nabantu abafika ku 19 Ukusuka ngelanga kuye namaholide ngezimpelasonto. Isitimela sokuqala kosuku isuka ngo 05:40 futhi kuthatha ingqikithi 2 amahora 37 amaminithi. Lokhu ngokuvamile kuba omunye amathikithi eshibhe etholakalayo, ngakho uma ungumuntu engakwenqeni avuka ekuseni ungagcina imali futhi amabombo out at sekhefu kokusa. Enye inzuzo yale ukuhamba ekuseni wukuthi kwesikhathi sakho sokufika Paris kuyinto 09:17, okusho ukuthi babe usuku lonke ngaphambi kwakho nganoma yikuphi imisebenzi ungathanda ukukhetha.
Disneyland Paris – Izitimela ukusebenzisa izikhathi eziningana ngesonto unyaka wonke futhi nsuku zonke ngesikhathi samaholide okuvalwa kwezikole. The train station is right outside the Disneyland entrance. Uhambo kuthatha ngaphansi 3 ingqikithi yamahora.
Lyon, Avignon, futhi eMarseilles- Kuwo wonke unyaka ka isitimela usebenza kusukela 1 ukuze 5 izinsuku ngeliviki, though it is seasonally affected so be sure it’s running when you need it. It uyama at Lyon Ingxenye-Dieu esiteshini (4.75 amahora), Avignon TGV esiteshini (6 amahora), futhi eMarseilles iSt Charles esiteshini (6.5 amahora).
Ukucinga indawo yethu ukuze amathikithi ncwadi konke izindawo engcono yaseYurophu, kufaka Belgium, Italy, Switzerland, kanye UK (kuhlanganise London eParis Isitimela Eurostar). search yethu injini yakhelwe eqela ngaphezulu on all tickets and includes no booking fees. Senza kube lula ngawe ukuba uthenga ngokwamukela ezindleleni eziningi lokuhola imali, kuhlanganise credit card, Giropay, iDeal, futhi abaningi.